Nnwom 91 NA-TWI - Onyankopɔn, yɛn hwɛfo - Obiara a - Bible Gateway
Nnwom 90Nnwom 92
Nnwom 91 Nkwa Asem (NA-TWI)
91 Obiara a wobɛkɔ Awurade nkyɛn sɛ wo guankɔbea, obiara a ɔbɛhyɛ Otumfoɔ no banbɔ ase no 2 tumi ka kyerɛ no se, “Woyɛ me hwɛfo ne me guankɔbea. Woyɛ me Nyankopɔn na mewɔ wo mu ahotoso.” 3 Ɔbɛkora wo afi bɔne a ahintaw nyinaa ne ɔyarewu nyinaa ho. 4 Ɔde ne ntaban bɛkɛta wo so; ne hwɛ mu, hwee renyɛ wo. Ne nokware bɛbɔ wo ho ban. 5 Ɛnsɛ sɛ wusuro anadwo mu amanehunu anaa awia mu ɔtaa 6 anaa ɔyaredɔm a ɛba anadwo anaa amumɔyɛde a ɛsɛe ade awia ketee.